အမှားအယွင်းဆိုသည်မှာ မိမိအတွက် နောက်တစ်ကြိမ်တွင် အမှန်တွေ့နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် အခွင့်အလမ်း | မျိုးကိုဝင်း
Window Installing စာအုပ် ဖြန့်ဝေခြင်း . . .
ကွန်ပျူတာ Hardware တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်။ Software ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Window Formatting ပြုလုပ်ခြင်း နည်းပါ ထည့်သွင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို စပြီး လေ့လာသူများနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများ အတွက်ပါ အသုံးဝင်မယ့် စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာ ကိုင်တွယ်သူတိုင်းတွင် ရှိသင့်သော စာအုပ်လေး တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ကို ဒီမှာ Click လုပ်ယူပါ။
Posted in Myo Ko Win
နည်းပညာစာအုပ်များ .. . .
Computer System and Hardware
စာရေးသူ - ဆရာဦးဇော်လင်း (Youth Computer)
စာအုပ်အမည် - ကွန်ပျူတာအကြောင်- အသေးစိတ်သိစရာ (Computer in Details)
စာအုပ်အမည် - A+ ၏နောက်ကွယ် (Beyond A+)
စာရေးသူ - မျိုးသူရ (openeyes@mail4u.com.mm)
စာအုပ်အမည် - ကွန်ပျူတာတပ်ဆင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်- နည်းအခြေခံသဘောတရားများ
စာရေးသူ - ဦးအေးကိုကို B.E. (Electronics) (FEB Computer Center)
စာအုပ်အမည် - အကောင်းဆုံး ကွန်ပျူတာပြုပြင်- ခင်း အခြေခံနည်းစနစ်နှ-့် တကယ့်လက်တွေ့ ပြုပြင်ခြင်း မှတ်တမ်းများ
စာရေးသူ - Robert Tin Aye
စာအုပ်အမည် - Applied AutoCAD (based on AutoCAD 2002)
စာရေးသူ - ဆရာဦးအောင်မြင့်
စာအုပ်အမည် - AutoCAD 2005
စာရေးသူ - SATURNGOD (MZ)
စာအုပ်အမည် - HTML မိတ်ဆက်
စာရေးသူ - မသိ
စာအုပ်အမည် - LINUX OS (မြန်မာလို)
စာအုပ်အမည် - Ubuntu Installation
DTP (or) Basic
စာရေးသူ - Zulu (kyawcross@gmail.com)
စာအုပ်အမည် - Basic Windows and Microsoft Word
စာအုပ်အမည် - Making Blog
စာရေးသူ - admin@mmwordpress.com
စာအုပ်အမည် - Making Myanmar Wordpress Blog Handbook
စာရေးသူ - ကိုညီလင်းဆက်
စာအုပ်အမည် - How to Make Myanmar Blog
စာအုပ်အမည် - Google vs Microsoft နဲ့ ကျွန်တော်တို့
စာရေးသူ - မသိ (သိရင်ပြောပြပေးကြ-ါခင်ဗျာ)
စာအုပ်အမည် - Access Database
စာရေးသူ - Major တိုးအောင် (WLAN)
စာအုပ်အမည် - သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် (Networking)
စာအုပ်အမည် - Internet Connection Sharing
လှပလိုသူများအတွက် . ..
(၁) သင်္ဘောသီးဟာ မျက်နှာပြင်က အမည်းစက်တွေကို ကင်းစင်ပြီး မလှမပနဲ့ ၀ါဖန့်ဖန့်အသားအရည်ကို အရောင်ပြန်လည်တောက်ပလာစေတယ် . . . .
(၂) ပျားရည်ကို မျက်နှာပြင်မှာ လိမ်းပေးပြီး ၁၀မိနစ်ထား ပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ သန့်စင်ပေးမယ် မျက်နှာသစ်ပေးမယ် ဆိုရင် မျက်နှာအသားအရည်ကို ချေးညော်ကင်းစင်သန့်ရှင်းပြီး ချောမွေ့စေနိုင်တယ် . . . . .
(၃) သခွားသီးအစေးလေးနဲ့ မျက်နှာကို ပွတ်ပေး ပြီင်္း ရေအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးမယ် ဆိုရင်လေ မျက်နှာအသားအရည်ပျော့ပြောင်းပြီး အရေပြားလေးကို တင်းရင်းနေစေတယ်တဲ့ . . . .
(၄) ကြက်ဥ က အနှစ် နဲ့မျက်နှာပြင်ကို လိမ်းထားပြီး ခြောက်သွေ့ရင်ရေနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးခဲ့ရင် အဆီများတဲ့မျက်နှာပြင်ပေၞက ချေးညော်တွေကို သန့်စင်စေပါတယ်တဲ့၊ မှဲ့ခြောက်တွေ၊ တင်းတိပ်တွေရှိသူတွေအတွက် လည်း သက်သာပျော်ကင်းစေပါတယ် တဲ့ . .
(၅) အကာက အသားအရေကို တင်းရင်းစေတာမို့ အကာလေးနဲ့ပေါင်းတင်ရင် မျက်နှာပြင်မှာ ပါးရည်တွန့်သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့ အကာရည်လေးကို ပါးပြင်မှာ လိမ်းထားပြီး ခြောက်သွေ့တာနဲ့ (ရေနွေးနွေးလေးနဲ့)မျက်နှာသစ်ပေးရတယ်လေ...ပြီးမှ ရေအေးလေးနဲ့ ထပ်သစ်ရတယ်အဲလိုလုပ်လိုက်ရင် မျက်နှာမှာ တင်းရင်းပြီး ကြည်စင်သွားသလိုခံစားရတာ လှနိုင်ကျပါစေဗျာ
Mon GTI/GTC/GTU Group
Popular Myanmar Jouunal
Zay Gwet Journal
Window တင်ပြီးရင် install လုပ်သင်တဲ့ Softwar များ
Window တင်ပြီးတော့ Software တွေ Run ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Blog Reader တွေကိုသတိရတာနဲ့ Window တင်ပြီး ဘာ Software တွေ Run သင့်တယ်ဆိုတာရယ် အဲဒီ Software တွေ Download ချလို့ရမဲ့ မူရင်း Website Link တွေကိုပါ အားလုံးအသိတိုးစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
(Winrar အရင် Run ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ Software တော်တော်များများက Download ချလိုက်ရင် Zip File တွေနဲ့ထွက်လာတာများပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါတွေကို ဖြည်လို့ရဖို့ Winrar ကိုအရင် Run တာပါ)
Drivers ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စက် Model No ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်စက်ရဲ့ Model No နဲ့ Google မှာလိုက်ရှာလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Window မတင်ခင် Driver တွေကိုအရင်ရှာထားသင့်ပါတယ်။ Driver မရှိရင် Window ကအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်နဲ့ Laptop Model No ချင်းတူတဲ့သူတွေ အတွက်အဆင်ပြေအောင် အဲဒီ Model No အတွက် Driver တွေ Download ချလို့ရတဲ့ Link ကိုပေးထားပါတယ်။ တခြားစက်တွေအတွက်တော့ ကိုယ့်စက် Model No ပေါ်မူတည်ပြီး Googling လုပ်နိုင်ပါတယ်။
For Fujitsu LifeBook S6520 / S6421 / S6420
3. AntiVirus & Spyware ( နှစ်သက်ရာ တစ်ခု သာ run ရန် )
Microsoft Security Essentials http://www.microsoft.com/Security_Essentials/
more form ** http://www.filehippo.com/software/antivirus/
Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/
Adobe Flash Player http://get.adobe.com/flashplayer/
Adobe Shockwave Player http://get.adobe.com/shockwave/
5. Audio ( နှစ်စ်သက်ရာ အချို့ကိုသာ run ရန်)
Real Player http://uk.real.com/realplayer/
6. Browser ( နှစ်စ်သက်ရာ အချို့ကိုသာ run ရန်)
7. Ccleaner & Defraggler
8. Chat ( နှစ်စ်သက်ရာ အချို့ကိုသာ run ရန်)
10. Download ( လိုအပ်မှသာ run ရန်)
အခြား တစ်ဆင့်ခံ Site များ
Blog တစ်ခု ကနေ ဖတ်ရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီအကို မောင်နှမ သူငယ်ချင်းတွေ အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
thememagic website မှကူယူဖေါ်ပြပါသည်။ . . . .
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာတွေကို ဖြန့်ဝေ ကူညီပေးနေတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ သွားကြည့်လိုက်ကြပါဦး ..
SanLinPaing ဒီနေရာလေးပေါ့ဗျာ ..
( ကွန်ပျူတာ ၀ါသနာရှင်များအတွက် ကျွန်တော် ဖတ်ထားသလောက်စာလေတွေကိုတစ်ခြားwebsite မှတဆင့်ကူယူတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်..)
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်းစားသောအကြောင်းအရာများကို တစ်နေရာတည်းမှကြည့်နိုင်အောင်ပဲစီမံထားခြင်းဖြစ်ပါသည် . .
ကျွန်တော်ဖတ်ထားသမျှလေးကိုသာ ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့အခါဖတ်ရအောင်စီမံထားဖြင်းဖြစ်ပါသည်. . .
အမှားအယွင်းဆိုသည်မှာ မိမိအတွက် နောက်တစ်ကြိမ်တွင် အမှန်တွေ့နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် အခွင့်အလမ်း
1။ မိမိပန်းတိုင်းကို တိကျပြတ်သားစွာ သတ်မှတ်ပါ..
မိမိအဖို့ မည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်လိုကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသားသိမြင်ပြီးသူအနေဖြင့် မိမိလုပ်လိုသည်ကတခြာ်း ဖြစ်နေသည့်အပေါ် ပိုပြီးပင် သိသိသာသာတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မိမိနှင့်လျော်ကန်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ကြိုးစားပြီး ညိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ မိမိ၏ အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိရမည်။ ထို အဆင့်သို့မရောက်မီကြားခံအဆင့်တွင် ဘာတွေ ဖြတ်သန်းရမည်ဆိုသည်ကို သိရှိရမည်။ မည်သို့ စတင်လုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည်ကိုလည်း သိရှိပြီးဖြစ်ရပါမည်။
အချိန်ကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပါ။ သို့မှသာ မိမိတကယ်တမ်းလုပ်၇န် လိုအပ်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရုံမျှမက မိမိအတွက် အရေးအကြီးဆုံး၊ အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်မည့် အလုပ်များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လည်းအချိန်ကျန်ရှိနေပေလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်ထွက်ပေါ်စေမည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ထဲတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်ရမည်၊ အရေးမပါ အရာမေ၇ာက်သော ဗာဟီရလုပ်ငန်းများ ဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိစိတ်ရှုပ်အောင်မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။
အကျင့်ဆိုသည်မှာ စွဲမြဲသွားလျှင်ဖျောက်ဖျက်ရန်ခဲယဉ်းလှသည်။ လူသည် မိမိလုပ်ဆောင်နေကျ ဘ၀ပုံစံအချိုးအစားအတိုင်း သမားရိုးကျခေါက် ရိုးကျိုး အရိုးဆွေးနေသည့် ပုံစံကြီးဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်တတ်ကြပြီး လမ်းမှန်ကမ်းမှန်အဖြစ် စွဲစွဲမြဲမြဲကျင့်သုံးမြဲ ကျင့်သုံးနေတတ်ကြသည်။ တကယ်တော့ လိုအပ်လျှင်ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရပေမည် အလုပ်တစ်ခုကို မိမိလုပ်နေကျ စာအုပ်ကြီးထဲက အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ။ တခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း စမ်းပ်လုပ်ကိုင်ကြည့်သင့်သည်။ ထိုသို့ အကျင့်မျိုး အသားကျပြောင်းလဲတတ်မှသာလျှင် အကျဉ်းအကျပ်ထရြောက်ချန် နည်းဗျူဟာ အပြောင်းအလဲများကို လျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေသော ပြသနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရသည့်အခါ များသောအားဖြင့် တာဝန်ယူ ပြေလည်အောင် နည်းလမ်းရှာ ဖြေရှင်းပေးရမည့်အစး ဟိုလူ့ခေါင်းပေါ်ပုံချသည် ဒီလူခေါင်းပေါ်ပုံချ လုပ်တတ်ကြသည်။ ထိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတိုင်း၊ဌာနတိုင်းလိလိ အများဆုံးတွေ့ရတတ်သော အချက်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ အမှားအယွင်းဆိုသည်မှာ မိမိအတွက် နောက်တစ်ကြိမ်တွင်အမှန်တွေ့နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းသိတတ်သင့်သည်။ အမှားကို သင်ခန်းစာယူခြင်းဖြင့် နောင်မမှားအောင် ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မိမိအလုပ် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြီးမြေက်အောင်မြင်ရန်မှာ အလုပ်ခွင်ရှိ တစ်ခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အဆင်ပြေပြေဆက် ဆံနိုင်ဖို့လိုအပ်လှသည်။ ထိုသိုပ ပြုလုပ်ရာတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုမျှဝေသုံးစွဲခြင်းး၊ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ စုပေါင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်း၊ စိတ်ကူးအကြံညဏ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေအသုံးပြုခြင်းတို့ ပါနီင်သည်။ အလုပ်သဘောဆက်ဆံရေးသို့ရောက်ရှိစေရန် အစွမ်း ကုန်ကြိုးစား စွန့်စားဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်။ စွန့်စားဖိုပဆိုသည်က တခြားသူများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာစေရန် ကြိုပမ်းအားထုတ်ဖိုပမဟုတ်ပါ။ ပြသနာဖြစ်စေမည့်ဆက်ဆံေ၇းမျိုးမှ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် မိမိဘက်မှ စတင်ပြီး ပြုပြင်ဖို့ အားထုတ်ဖို့သာ ဆိုလိုပါသည်။
မျှော်လင့်မထားသော အောင်မြင်မှုမျိုးနှင့် ကြုံလာလျှင် မည်သို့တုံ့ပြန်ပါမည်နည်း။ မျှော်လင့်ချက်များ လဲပြိုပျက်စီးသွားသော အခြေအနေမျိုးသည် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် လက်မြှောက် အရှုံးပေးသင့်သောပြသနာတော့မဟုတ်ပါပေ၊ ဇွဲရှိခြင်းဆိုသည်မှာ လေကြောင်းအတိုင်းချိန်ရွှယ်တိုင်းဆပြီး ရွက်လွှင့်ရသည်နှင့်တူသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေသစ်များကို လိုက်နာအဆင်သင့်သလို တုံ့ပြန်ရန်လိုအပ် သည်မှာ မှန်ပင်မှန်ငြားသော်လည်း ထိုသို့ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် မိမိ၏ အဓိက ဦးတည်ရည်မှန်းချက်များ လွဲချော်မသွားစေရန် ဂရုစိုတ်တည့်မတ်ရန်လိုပေသည်။.....
Myanmar LGBT Society
အပျင်းပြေ သီချင်းတွေ နားထောင်ရအောင်
ရွှေဈေး . ငွေဈေး အွန်လိုင်းတွင်မေး
Free Webiste Yola
Korea - Myanmar Dictionary
ကျော်မယ် .. ခွမယ် VTunnel
အီးမေးလ်ထဲကနေ ကြီးမားတဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်တွေ ပို့ချင်ပြီ...
မြန်မာပြည်မှာ ဒိုမိန်း . ဟိုစတင် ၀ယ်လို့ရပြီ
ဇလွန် ပြည်တော်ပြန် စမ္မခဏ် ဂါထာ
ကျော်ခွဖို့အရေး ibypass လေး
blog အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
Website Links ..
Flash Effect Maker Pro v5.01 [ installer ]
How To: Embed Zawgyi Font In Webpages
Canon mx328 Resetter
Re: (၁) Forum တွေရှိတာ ကောင်းတယ် / မကောင်းဘူး။